milina fanalefahana hafana amin'ny induction ho an'ny fizotran'ny preheating welding.
Fanalefahana ny adin-tsaina fanafanana induction Ho an'ny vy izay namboarina tamin'ny fomba mangatsiaka, noforonina, namboarina, namboarina, na notapahina, dia mety ilaina ny manamboatra hetsika fanalefahana adin-tsaina mba hampihenana ireo adin-tsaina noforonina nandritra ny fizotry ny famoronana.
Fanamaivanana ny adin-tsaina fanafanana induction dia ampiharina amin'ny alloys ferrous sy non-ferrous ary natao hanesorana ireo adin-tsaina sisa tavela vokarin'ny fizotry ny famokarana teo aloha toy ny milina, ny fikotrana mangatsiaka ary ny welding. Raha tsy misy izany, ny fanodinana manaraka dia mety hiteraka fanodikodinam-bola tsy azo ekena ary / na ny fitaovana dia mety hijaly amin'ny olana amin'ny asa fanompoana toy ny famotehana ny lozisialy. T ny fitsaboana dia tsy natao hamokatra fiovana lehibe eo amin'ny rafitry ny fitaovana na ny toetra mekanika, ary noho izany dia voafetra amin'ny mari-pana somary ambany ihany.
Ho an'ny vy izay namboarina tamin'ny fomba mangatsiaka, noforonina, namboarina, namboarina, na notapahina, dia mety ilaina ny manamboatra hetsika fanalefahana adin-tsaina mba hampihenana ireo adin-tsaina noforonina nandritra ny fizotry ny famoronana.
Ny fihenjanana amin'ny vy vokatry ny fiasan-damba dia mety hiteraka fiovan'ny refy, fanodikodinana, tsy fahombiazana mialoha ny fotoana na famotehana ny adin-tsaina amin'ny ampahany rehefa avoaka ireo adin-tsaina ireo. Ny faritra misy fepetra takiana amin'ny lafiny henjana dia mety mitaky fanamaivanana ny adin-tsaina alohan'ny hanaovana ny famokarana hafa. Ny faritra vita amin'ny vy dia azo alaina tsy misy fihenjanana miaraka amina fiasan'ny fanafanana vizana.
Fanamaivanana ny adin-tsaina dia azo tanterahina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny voafehy na fantsona hampihenana ny okididra.
Ny vy vy sy ny firaka vy dia azo omena endrika fanamaivanana roa:
1. Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny 150-200 ° C dia manamaivana ny adin-tampon'ny aorinan'ny fanamafisana raha tsy mampihena be ny hamafiny (oh: singa sarotra, bearings, sns.):
2. Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny 600-680 ° C (ohatra, aorian'ny fametahana, fametahana milina sns) dia manome fanamaivanana tanteraka.
Ny alikaola tsy ferrous dia manamaivana ny fihenjanana amin'ny maripana marobe mifandraika amin'ny karazana firavaka sy ny toetrany. Ny alika izay nohamafisina noho ny taonany dia voafetra amin'ny fanamaivanana ny mari-pana ambanin'ny maripanan'ny fahanterana.
Ny steels stainless austenite dia manamaivana ny fihenjanana ambanin'ny 480 ° C na mihoatra ny 900 ° C, ny mari-pana eo anelanelan'ny fampihenana ny fanoherana ny harafesina amin'ny naoty tsy milamina na karbaona ambany. Ny fitsaboana mihoatra ny 900 ° C dia matetika ny fametahana vahaolana.
Normalizing ampiharina amin'ny sasany, fa tsy ny rehetra, ny vy vy, ny normalizing dia afaka manalefaka, manamafy na ny adin-tsaina manamaivana fitaovana iray, arakaraka ny toetrany voalohany. Ny tanjon'ny fitsaboana dia ny fanoherana ny vokatry ny fizotrany teo aloha, toy ny fanariana, fanaovana hosoka na fihodinana, amin'ny alàlan'ny fanadiovana ireo rafitra tsy misy fanamiana ho lasa iray izay manatsara ny fahaizan'ny machinability / formability na, amin'ny endrika vokatra sasany, mahafeno ny fepetra takian'ny mekanika farany.
Ny tanjona voalohany dia ny manisy vy fa, aorian'ny famolavolana azy, ny singa iray dia mamaly amin'ny fomba feno ny asa mafy (ohatra ny fanampiana ny fitoniana dimensional). Ny normalizing dia misy ny fanafanana vy mety amin'ny mari-pana matetika amin'ny elanelana 830-950 ° C (na mihoatra ny mari-pana mihamafy amin'ny vy mihamafy, na eo ambonin'ny mari-pana amin'ny carburising) ary avy eo mangatsiaka amin'ny rivotra. Ny fanafanana dia matetika atao amin'ny rivotra, noho izany dia ilaina ny milina na ny famaranana ny tany mba hanesorana ireo sosona mizana na simika.
Ny vy vy manamafy ny rivotra (ohatra ny vy mandeha amin'ny fiara mandeha ho azy) dia matetika "voadona" (ampidirina an-tsokosoko) aorian'ny fanaovana azy ho ara-dalàna mba hanalefaka ny firafitra sy / na hampiroborobo ny fahaizan'ny milina. Betsaka ny mari-pahaizana momba ny fiaramanidina no miantso an'io fitambarana fitsaboana io. Ny vy tsy mahazatra ara-dalàna dia ireo izay hihamafy mandritra ny fampangatsiahana rivotra (ohatra ny vy maro vy), na ireo izay tsy mahazo tombony ara-drafitra na mamokatra firafitra tsy mendrika na fananana mekanika (ohatra ny vy vy).
Masinina PWHT preheating induction dia be mpampiasa amin'ny paompy / fantsom-bozaka peheat sy pwht, famerenana ny adin-tsaina sns.
Ny famafana dia iray amin'ireo dingana tena manakiana indrindra amin'ny fanamboarana sambo fanerena toa ny vilanin'ny famokarana angovo hafanana. Ny mari-pana amin'ilay dobo vy nandrendrika nandritra ny fizotrany dia tao anatin'ny 2000 deg C. Haingana sy haingana ny fiakaran'ny hafanana. Rehefa mangatsiatsiaka ny fantson-drano misy lovia kely anidina dia miteraka fihenjanana mafana izay mihidy ao anaty vy. Io koa dia afaka manova ny macrostructure ny vy.
Ny PWHT dia manafoana ireo vokatra ireo amin'ny alàlan'ny fanamainana, alona ary fampangatsiahana ny faritra las amin'ny fomba voafehy amin'ny mari-pana ambanin'ny teboka fanovana voalohany, manome ny rafitra makro ampy fotoana hanarenana ny toetrany tany am-boalohany sy ny fanesorana ireo adin-tsaina sisa tavela.
Ny PWHT dia misy ny fanafanana ny metaly aorian'ny fizotran'ny fantsom-pandrefesana amin'ny fomba voafehy amin'ny mari-pana ambanin'ny teboka fanovana voalohany, alemana ao amin'io mari-pana io mandritra ny fotoana maharitra, ary ny fampangatsiahana amin'ny taha voafehy.
Fanamorana ny induction dia fomba iray ahazoana laza na dia lafo aza ny vidiny. Ity dia fizotran'ny namana mpihaza kokoa. Tsy toy ny fanafanana fanoherana fa ny fantsona ihany no lasa mafana. Ny gradien'ny mari-pana dia mitovy amin'ny hateviny.
Ny herin'ny fanafanana dia avy amin'ny 10KW ~ 120KW
Modely: 10KW, 20KW, 40KW, 60KW, 80KW, 120KW sns.
Temperature fanafanana: 0 ~ 900 C
Hafanana hafanana Max: 900 C
Ny savaivon'ny fantsom-by / fantsona: 50 ~ 2000 mm
Coil fanamainana: coil clamp na lamba firakofana fampidirana
Ny milina fanamafisana induction dia misy:
1. loharanom-pahefana fanamafisana induction.
2. Tariby fanamafisam-peo malefaka malefaka
4. K Type thermocouple
5. Mpanoratra taratasy / tsy misy taratasy sns.
Ampitahao amin'ny heater amin'ny seramika sy ny heater amin'ny rindrina. Manana tombony bebe kokoa io.
1. Hafainganana haingana sy hafanana tsy azo avela
2. Mitsitsy angovo tsy misy fandotoana
3. Fotoana miasa maharitra ary milamina kokoa
4. Kitendry sy fanaraha-maso PLC, mora ampiasaina
5. Afaka mifanaraka amin'ny toe-javatra welding isan-karazany
Sokajy Technologies Tags mividy milina manala poizina amin'ny induction, fanalefahana ny adin-tsaina fampidirana, fanalefahana ny indraindray, fanalefahana ny adin-tsaina fampidirana, vidin'ny fanalefahana adin-tsaina fampidirana, dingana fanalefahana adin-tsaina fampidirana, rafitra fanalefahana adin-tsaina fampidirana, fanalefahana adin-tsaina manintona, fanalefahana ny adin-tsaina, heater manamaivana ny adin-tsaina, ny fihenan'ny alikaola Post Fikarohana
sambo-tanky reactatera fanafanana induction